Nandefa tampim-bava miisa 700.000 any Chine ny ao Vatican ho fandraisany anjara amin'ny ady atao amin'ny fihanaky ny tsimokaretina. Nalefa mivantana any amin'ny faritanin'i Hubei misy an'i Wuhan izay toerana voalaza ho niandohan'ity valanaretina entin'ny coronavirus ity sy any Zhejiang ary Fujian ireo tampim-bava ireo. Nilaza ny talen'ny famoaham-baovao eo anivon'ny Fiketrahana Masina, Matteo Bruni, fa tsy mbola misy atahorana amin'ny mety hahatongavan'io valanaretina io any Vatican ankehitriny. Efa tafakatra 427 moa ny isan'ireo namoy ny ainy vokatry ny coronavirus, tato anatin'ny iray volana mahery niandohan'ny aretina ka any Chine avokoa ny 425 amin'ireo. Tompo-marika tamin'ny fandefasana ireo tampim-bava marobe ireo ny Kardinaly Konrad Krajewski (aumônier du pape) sy ny farmasian'i Vatican ary ny "Centre missionnaire de l'Eglise chinoise" any Italie.